Sifooyinka Gabadha Quruxda Badan Ee Ay Raggu Ka Baxsadaan, Hadii Gabadhu Leedahay Sifooyinkan Ma Jiro Nin U Istaagaya – Allsomali.net | BANAADIRSOM
Home Arimaha Bulshada Sifooyinka Gabadha Quruxda Badan Ee Ay Raggu Ka Baxsadaan, Hadii Gabadhu Leedahay...
Sifooyinka Gabadha Quruxda Badan Ee Ay Raggu Ka Baxsadaan, Hadii Gabadhu Leedahay Sifooyinkan Ma Jiro Nin U Istaagaya – Allsomali.net
Waxa uuna shaki ku jirin in quruxda gabadhu door weyn ka ciyaaro in uu Ninku ka helo gabadha, laakiin quruxda ayaan ahayn wax walba maadama ay jiraan sifooyin keeni kara in uu Ninku ka baxsado gabadha inkasta oo ay qurux badantahay.
Hadaba waxa aan maanta halkan ku soo bandhigi doonaa sifooyinka gabadha quruxda badan ee keeni kara in ay Raggu ka baxsadaan gabadha leh.
Kibirka ayaa imanaya kaalinta 1-aad ee sifooyinka gabadha quruxda badan ee uu Ninku kaga baxsan karo, sababta oo ah Kibirki waa sifo u xun quruxda kana dhigaya waliba gabadha ugu foosha xun dumarka, sidoo kale kibirka ayaa soo saaraya astaamaha xun ee gabadha taas oo ah mid uuna Ninku marna aqbali karin.
2.Gabadha dalabaadka badan:
In ay gabadhu qurux badnaato ay la haato dabeecad fiican ayaa ka fiican in ay ahaato gabadh dalab badan sababta oo ah dalabkeeda badan waxa ay ku dhibaysaa quruxdeeda sababta oo ah Raggu way ka baxsadaan dumarka mar walba wax dalbada.
Ma jiro Nin diyaar u ah in uu aqbalo gabadh been badan si walba oo ay u qurux badantahay sababta oo ah Beentu waxa ay dishaa xidhiidh walba sidoo kale beentu waa sifooyinka uu Raggu ka baxsadaan dumarka sababta oo ah beentu waxa ay dishaa kalsoonida labada qof.
4.Gabadha Cabashada Badan:
Ragga ayaa ka baxsada dumarka ama gabadha cabashada badan si walba oo ay u qurux badantahay sababta oo ah cabashadeeda joogtada ah ayaa dhaawacaysa quruxdeeda maadama ay mar walba cabanayso waliba ay adagtahay in la raali galiyo.
5.Gabadha Dhibta Badan:
Hadii ay Gabadhu tahay mid dhib badan waxa ay keenaysaa in uu Ninku ka baxsado sababta oo ah dhibtu waa sifo u xun dumarka oo keenaysa in uu Ninku ka fogaado gabadha qurux walba oo ay leedahay.
6.Gabadha Madaxa adag:
Madax-adaygu waxa uu dilaa quruxda badan, waxana uu ka dhigaa mid uuna Ninku xamili karin sidaas darteed waa sifo aan fiicnayn oo ay Raggu kaga baxsadaan dumarka madaxa adag ee aanay waxba galin.
Previous articleMemphis Depay Oo Ka Hadlay Ka Garab Ciyaaristiisa Messi & Aguero. – banaadirsom
Next articleWararkii Ugu Dambeeyay Ciyaaraha Ben White,Grealish , Pogba ,Ronaldo,Koundé Iyo Xogo Kale
Mahad salaad oo la sheegay in Duulaanka guriceel ugu aar gudayo...
Khalkhal ku furmay ictiraafkii ay raadineysay Somaliland kadib war kasoo baxay...
Shir albaabada uxiran oo xubnaha Nabad & Nolol ku yeesheen Villa...